Dhismaha isku xirka iyo dhismaha sumadda ayaa ah qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo boggaaga internetka. Semalt, waxaan fahamsanahay inaad isku dayeysey inaad soo dejiso degelkaaga oo aad ka dhigto meel sare. Taasi waa inta badan sababta aad halkan u joogtid. Laakiin waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn kaligaa.
Taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay adeegyada ay Semalt bixiso. Adeegyadeena waxay dammaanad ka qaadayaan inaad hesho dhag sii badan oo u rogi doona macaamiisha waqti aan xad lahayn, qiimo jaban oo la awoodi karo. Kuma tiirsanaano sixirka ama shaqada qiyaasta. Waxaan qabsanaa shaqada iyadoo ay sabab u tahay xirfaddeena iyo u heelnaanta shaqadeena. Kudos kooxda cajiibka ah ee SEO!
Waxaan bixinaa xirmo kaladuwan oo hubinaya inaad hesho adeeg ku habboon baahiyahaaga gaarka ah adigoon tanaasulin. Dhisida meherad ama magac weligeed ma fududaan. Waxaan hubnaa in aqoon-isweydaarsiyo badan oo ganacsi oo guul leh iyo hadalo dhiirrigelin leh ay kuu sheegeen sida ay muhiimka u tahay in la helo astaan, magac. Laakiin si dhib yar ayay waligood kuu sheegi doonaan sida ay u adag tahay in la aasaaso astaanta.
Maanta, waxaad haysataa Semalt kaa caawinaya inaad kor u qaaddo sumcaddaada oo aad maamusho xirfadlayaal khibrad leh oo yaqaana dariiqooyinka saxda ah ee shaqada lagu qabanayo. Markii aan dhammeyno ka shaqeynta bartaada internetka, waxaan dammaanad qaadaynaa inaad ku arki doontid horumar aad u weyn oo ku aaddan sumcaddaada iyo xiriiriyeyaasha websaydhkaaga.
Waa maxay isku xidhka isku xidhka?
Dhismaha isku xidhka waa habka loo helo dib-u-xiriirrada bogagga kale ee internetka. Haddii aad ka aqrinaysay boggeena internetka, dib u soo celinta xiriirka waa inay noqotaa erey caan ah. Si kastaba ha noqotee, halkan waa qeexitaan. Xirmooyinka dib-u-xirnaanta ama isku-xirnaanta isku-xirnaanta ayaa ah hab ay u adeegsadaan isticmaaleyaasha websaydhada websaydhada kale. Waa tan hab fudud oo lagu dhejiyo. Semalt wuxuu ka dhigayaa websaydhkaaga kuwo aad u fiican inay nuqul ka dhigaan qaar ka mid ah waxyaabahaaga laakiin ku dheji xiriiriyaha waxyaabaha asalka u ah websaydhkaaga. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaaleyaasha booqda websaydhka kale, dhagsii isku xirka xiriiriyahana waxaa loo diraa shabakadaada. Cheers, taasi waa hal isticmaale oo dheeraad ah oo uu ku daray Semalt.
Aynu nidhaahno waxaad raadineysaa macnaha SEO, oo waxaa lagu geyn doonaa goobta "A", laakiin marka la sheegayo qeexida iyo muhiimada SEO, waxaa lagaa codsanayaa inaad gujiso "halkan" si aad waxbadan uga ogaato. Haddii aad gujiso, waxaa si otomaatig ah laguu geyn doonaa degel cusub sida Semalt. Taasi waa waxa loo yaqaan 'hyperlink' ama 'backlinklink'.
Mashiinnada raadinta ayaa waliba adeegsada xiriiriyeyaashaan si ay ugu gurguuraan shabakadda. Haddii erey muhiim ah la baaro, matoorada raadinta waxay ushaqeeyaan iyagoo u muuqda midka ugu fiican. Laakiin halkan waxaa jira hal shay oo la yaab leh oo ku saabsan dib-u-xirida, halkii ay ka ahaan lahaayeen makiinadaha raadinta si ay u joojiyaan waxa ay u arkaan inay yihiin kuwa ugu fiican, waxay sii wadaan inay sahamiyaan dib-u-eegisyada websaydhadaas.
Sidan, websaydhkaaga ayaa uqalma raadinta waxuuna badanaa muuqan doonaa bogga koowaad marka natiijooyinka la soo bandhigo. Laakiin hadaadan nasiib ku filan helin, waxaad heleysaa raadad aad ku sameyso boggag kale oo lasoo bandhigay si aad ugu yeeri karto xaalad guul.
Maanta, waxaa jira farsamooyin badan oo loogu talagalay dhismooyinka isku xirka, wayna ku kala duwan yihiin marka dhibku jiro. Annaga oo ah khubarada SEO, waxaan ognahay in isku xidhka isku xirku uu yahay midka ugu adag shaqadayada. Inta badan badanaa, kuwa aan xirfadleyaasha ahayn ayaa waqtigooda ku lumiya inta ugu badan waqtiga ay isku dayayaan inay saxaan. Sababtaas awgeed, waa inaad uga tagtaa hawshaan kooxdeena cajiibka ah ee yaqaana sida saxda ah ee loo saxo isla markaana diirada loo saaro waxyaabo kale oo muhiim ah.
Ma sahlana in la helo degello kale inay kuu aqoonsadaan inaad tahay il la aamini karo. Suuqa noocaan oo kale ah ee tartanka, way fududahay in laga dhigo cadaw ka badan xulafooyinka, laakiin dhisida isku xidhka ayaa wali ah mida ugu wanaagsan ee lagu hor mari karo tartanka.
Muxuu dhismaha xiriirku muhiim ugu yahay kobcinta SEO?
Si aad si buuxda u fahamno ahmiyadda dhismaha isku xidhka, waxaa muhiim ah inaan marka hore fahanno aasaaska xiriiriyadan. Waxyaabaha sida
Sidee xiriirada loo abuuraa
Sida matoorada baaristu u arkaan xiriirada
Iyo sida makiinadaha raadinta ay u tarjunto xiriiradaan
<a href=https://semalt.net> dhismaha isku xirka iyo dhismaha sumadda </a>
Bilowga calaamadda xiriiriye: kani waxaa lagu magacaabaa sumadda xarkaha wuxuuna matalaa "a" oo lagu muujiyey tusaalaha kor ku xusan. Waxay furaysaa calaamadaha xiriirka waxayna u sheegtaa mashiinka raadinta in isku xirka soo socdaa uu yahay degel kale ama bog kale.
Iskuxir meesha gudbinta. Soo gaabinta "herf" waxay u taagan tahay si sax ah bogga hortiisa. Waxay u taagan tahay gudbinta hyperlink, mana aha inay ku lifaaqdo websaydh keliya. Isku-xirkan ayaa noqon kara albaabka sawir ama fiidiyow ama fayl aad ku soo dejiso.
Xarkaha muuqda ee xariirka ayaa ah waxyar oo ka mid ah xariirka akhristaha uu ku arko bogga ku xirka xiriiriyaha ay u baahan yihiin inay riixaan haddii ay doonayaan inay furaan xiriirka. Qoraalkan waxaa badanaa loo qaabeeyaa qaab gaar ah si looga dhigo kuwa ka soo baxa qoraalada kale. Badanaa, waxaa lagu matalaa midab buluug ah oo dhalaalaya oo indhaha qabta, taas oo tilmaamaysa in la gujin karo
Xiritaanka calaamadda xiriirika: “</a>” waxay muujineysaa dhamaadka tagga xiriirka ee makiinadaha raadinta.
Faa'iido intee leeg ayay dib-u-eegida ku yeeshaan matoorada raadinta?
Mashiinnada raadinta waxay u adeegsadaan xiriiriyeyadan mid ka mid ah laba siyaabood.
Si loo helo bogag cusub.
Si looga caawiyo go'aaminta sida ugu wanaagsan ee bog u qiimeeyo natiijooyinkiisa.
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin websaydhyadaan waa la soo saaraa waxaana lagu daraa tusmooyinkooda marka matoorada raadinta ay ka helaan websaydhka shabakadahaan. Sidan, websaydhkaaga ayaa la arkaa, oo haddii uu buuxiyo heerarka mashiinka raadinta, ayaa la soo dejin doonaa. In kasta oo ay ka fikirayaan tayada iyo booska websaydhkaaga, kama fiirsanayaan waxa aad ka kooban tahay oo keliya. Waxay sidoo kale sabab u yihiin tirada dib-u-soo-celinta websaydhkaaga. Tiro aad u tiro badan oo dib loo soo xiriiro ayaa caadiyan macnaheedu yahay in waxyaabahaagu ay aad waxtar u leeyihiin, taasoo ka dhigaysa mudnaanta koowaad ee matoorada raadinta.
U adeegsiga xiriiriyeyaasha qiimeyn waa mid ka mid ah sababaha google bilaabayso inuu u isticmaalo sida mashiinka raadinta 1990-yadii.
Ganacsiyada yaryar, dhisida sumad waligeed ma fududa. Si ka duwan noocyada kale ee waaweyn, si dhif ah looma yaqaan meel ka baxsan deriskaaga ama bulshadaada. Laakiin ganacsi kastaa inuu kobco, waxaad u baahan tahay inaad dhisto magac shirkadeed, aqoonsi sumadeed. Ka fikir KFC, markasta oo aad maqashid magaca, maskaxdaadu waxay ku siineysaa faahfaahinta oo dhan, laga bilaabo madaxa sare ilaa dhadhanka digaagga. Taas waa saamaynta ay astaan u leedahay shaqsiyaadka.
Semalt wuxuu ku siinayaa fursadaha ugu fiican iyo fursadaha aad ku ogaan karto astaantaada. Ganacsi ahaan yar, Semalt wuxuu aqoonsan yahay inaad u baahan tahay dhammaan caawimaadda aad heli karto. Tani waa sababta aan ugu bixinno adeegyo ka jaban tayada ugu wanaagsan. Ka fikir sida aan u tusno inaan aqoonsaneyno dadaalkaaga.
Astaantaadu waa muhiim laakiin si laguugu ogaado agagaaraha, waxaad ubaahantahay goobta ugu weyn ee laga qayliyo. Nidaamkaas ayaa ah Semalt oo lagu daray mashiinka raadinta sida Google. Iyadoo la adeegsanayo xirfadaheena iyo websaydhkaaga Google, “eeyaha waaweyn” fursad uma taagna.
Hagaajinta taraafikada, boggaaga ayaa helaya, sumadaynta ayaa aad muhiim u ah. Tani waa sababta oo ah Google had iyo jeer waxay bixisaa dawooyinka doorbidista doorbidista. Caadi ahaan sumadda ayaa ka fiicnaata darajooyinka iyada oo xiriir hooseeya. Faa'iido kale oo weyn oo ah inaad sumcad ku dhisto Google ayaa ah in websaydhkaagu dib u soo noolaado muddo yar kadib, xitaa marka lagu ciqaabo anshax xumo.
Laakiin noocyada yaryar ma aha tan fudud. Sababta oo ah waxaad cusub tahay, weligaa ma helaysid waxtarka shakiga. Iyo shaqo aad u adag si aad u hesho kaalinta.
Dhisidda calaamad aad ayey u adag tahay inay qaadan karto sannado kahor intaan lagu arkin ama lagu soo bandhigin SERPs.
Miyaad haysan waqti dheer miyaa?
Jawaabtu wali waa Semalt. Ugudambeyn, waa inaad ogolaataa in Semalt uu yahay habka ugu ammaansan uguna wanaagsan ee magacaaga halkaas looga bixiyo iyadoo aan lumin hurdo ama lacag.
Dhisidda sumad waa u fududahay sida ay u adag tahay. Markii aad shaqaaleysatid xirfadlayaal, waad nasataa oo waxaas oo dhan culays saareysaa qof kale. Adeegsiga warbaahinta bulshada waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loo dhiso sumad haddii aad go'aansato inaad kaligaa taas ku sameyso.
Iyada oo Google ay cusbooneysiineyso Tilmaanta Qiimeynta Tayada si loo meel mariyo siyaasadaha EAT (khibrad u leh aaminaad aaminaad leh), waxaan hadda arki karnaa in Google uu isku dayay inuu aqoonsado bogag / bogag u qalma in si muuqata loogu arki karo natiijooyinka raadinta.
Calaamadeynta khadka tooska ah ee internetka waxay aad ugu egtahay hab dhaqameedka SEO. Si loo dhiso astaan adag, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso aragtida goobtaada iyo joogitaankaaga khadka tooska ah. Si aad tan u hesho tan, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso waxyaabaha aad ka fuliso goobta iyo waxyaabaha aad ka sameyso meel ka baxsan goobta.
Dhismaha sumadda, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxa aad ka kooban tahay iyo waxa dadka kale ka dhahayaan waxa ku jira. Tani waa sababta dhowr dhinac oo horumarsan oo SEO loogu qasbo summadaynta khadka tooska ah marka aad u hirgaliso habka saxda ah.